बिज्ञान प्रबिधि Archives - Page 8 of 11 - Daily Lokmandu
विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश, जहाँ कुनै अपराध हुँदैन ! पुलिस कसलाई भन्छ भन्ने समेत थाहा छैन कसैलाई पनि !!!
July 24, 2018 Comments Off on विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश, जहाँ कुनै अपराध हुँदैन ! पुलिस कसलाई भन्छ भन्ने समेत थाहा छैन कसैलाई पनि !!!
के तपाईले अहिलेसम्म संसारको कुनै यस्तो देशको बारेमा सुन्नु भएको छ जहाँ न कुनै सेना-प्रहरी छन् न नौसेना नै…? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने हामी आज तपाईलाई उक्त देशको बारेमा बताउनेछौं। सिर्फ यति मात्र होइन [ पुरा पढ्नुहोस ]
यही हप्ता इतिहासकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यो समयमा झुकिएर पनि नगर्नुस् यी कार्यहरु पूरा पढ्नु होस ।। जानकारिको लागि शेयर गर्नु होस ।
July 23, 2018 Comments Off on यही हप्ता इतिहासकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यो समयमा झुकिएर पनि नगर्नुस् यी कार्यहरु पूरा पढ्नु होस ।। जानकारिको लागि शेयर गर्नु होस ।
यही हप्ता इतिहासकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यो समयमा झुकिएर पनि नगर्नुस् यी कार्यहरु पूरा पढ्नु होस ।। जानकारिको लागि शेयर गर्नु होस । काठमाडौ । यो बर्ष इतिहासकै लामो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । साउन ११ [ पुरा पढ्नुहोस ]
यही हप्ता इतिहासकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यो समयमा झुकिएर पनि नगर्नुस् यी कार्यहरु पूरा पढ्नु होस ।।
July 23, 2018 Comments Off on यही हप्ता इतिहासकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यो समयमा झुकिएर पनि नगर्नुस् यी कार्यहरु पूरा पढ्नु होस ।।
काठमाडौ । यो बर्ष इतिहासकै लामो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । साउन ११ गते पूर्णीमा दिन परेको खग्रास चन्द्रग्रहण इतिहासकै लामो चन्द्रग्रहण रहेको ज्योतिषहरुको दावी छ । हरेक व्यक्तिहरुलाई चन्द्रग्रहणका बेला के गर्ने भन्ने बारे राम्रो ज्ञान [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 23, 2018 Comments Off on यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं !
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन । इन्टरनेटको [ पुरा पढ्नुहोस ]
भगवान् विष्णुकाे दर्शन गर्नुहाेस्, अाज हरिशयनी एकादशी : तुलसीको विरुवा रोपेर, भगवान् विष्णुकाे अाराधना गरी मनाइँदै छ ।
July 23, 2018 Comments Off on भगवान् विष्णुकाे दर्शन गर्नुहाेस्, अाज हरिशयनी एकादशी : तुलसीको विरुवा रोपेर, भगवान् विष्णुकाे अाराधना गरी मनाइँदै छ ।
भगवान् विष्णुकाे दर्शन गर्नुहाेस्, अाज हरिशयनी एकादशी : तुलसीको विरुवा रोपेर, भगवान् विष्णुकाे अाराधना गरी मनाइँदै छ । काठमाडाैं । अाज हरिशयनी एकादशी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत बसेर तथा घरघरमा तुलसीको विरुवा सारेर मनाउँदै छन् । भगवान विष्णुको मन्दिरमा दर्शनार्थीको बिहानैदेखि [ पुरा पढ्नुहोस ]
तपाईको जन्मिएको महिना कुन हो ? हेर्नुहोस् यी महिना मा जन्मिने व्यक्ति अर्बपति हुन्छन्
July 22, 2018 Comments Off on तपाईको जन्मिएको महिना कुन हो ? हेर्नुहोस् यी महिना मा जन्मिने व्यक्ति अर्बपति हुन्छन्
तपाईको जन्मिएको महिना कुन हो ? हेर्नुहोस् यी महिना मा जन्मिने व्यक्ति अर्बपति हुन्छन् ग्रह, नक्षत्र, बार, तिथिहरुको आधारमा मानिसहरुको भविष्यको फल बनाइन्छ । यसमा महिनाको पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।१. बैशाख महिनाः बैशाख [ पुरा पढ्नुहोस ]
रुद्राक्ष किन लगाइन्छ ? यसको अद्भूत रहस्या जान्नुहोस्, र एक सेयर गर्नुस नसोचेको काम बन्ने छ ।
July 22, 2018 Comments Off on रुद्राक्ष किन लगाइन्छ ? यसको अद्भूत रहस्या जान्नुहोस्, र एक सेयर गर्नुस नसोचेको काम बन्ने छ ।
रुद्राक्षको किस्सा त तपाईंले कति सुन्नुभयो, कति । एकमुखे रुद्राक्षको मूल्यदेखि बहुमुखे रुद्राक्षको गुणगानसम्म सुनिसक्नु भएकै छ । ठमेलतिर घुम्न निस्कनुहोस् वा पशुपतिनाथ, रुद्राक्षकै दोकान देख्नुहुनेछ । तपाईंलाई लाग्दो हो, यदि धेरै रुद्राक्ष कसेले किन्छ [ पुरा पढ्नुहोस ]
बुढी आमा भन्छिन् छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर बाच्नु नै बेकार जस्तो लाग्यो :: एक पल्ट पढ्नु होस पक्कै पनि मन रुने छ ।
July 19, 2018 Comments Off on बुढी आमा भन्छिन् छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर बाच्नु नै बेकार जस्तो लाग्यो :: एक पल्ट पढ्नु होस पक्कै पनि मन रुने छ ।
बुढी आमा भन्छिन् छोराको कुरामा “बुहारीले जुन जवाफ दिईन, त्यो सुनेर बाच्नु नै बेकार जस्तो लाग्यो :: एक पल्ट पढ्नु होस पक्कै पनि मन रुने छ । छोरा-बुहारी आफ्नो बेडरूममा कुरा गरिरहेका थिए, ढोका खुल्लै [ पुरा पढ्नुहोस ]
दोलखा भीमसेन र कालिञ्चोक भगवतीको महिमा, एक/एक सेयर गरौ तपाईका अपुरा काम पूरा गर्नुहुनेछ !
July 16, 2018 Comments Off on दोलखा भीमसेन र कालिञ्चोक भगवतीको महिमा, एक/एक सेयर गरौ तपाईका अपुरा काम पूरा गर्नुहुनेछ !
दोलखा भीमसेन र कालिञ्चोक भगवतीको महिमा, एकएक सेयर गरौ तपाईका अपुरा काम पूरा गर्नुहुनेछ ! दोलखा : त्रिभूज आकारको अमूर्त कालो शिला मूर्तिलाई भीमेश्वर, भीमसेन या भैरवको रूपमा पुजिन्छ। त्यसैले एक शिला तीन अबतार मानिएको [ पुरा पढ्नुहोस ]
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,228)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,171)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,110)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,066)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (961)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (592)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (561)